Ukudideka malunga nezatifikethi zokugonya kuthintela ukubuyela kwimeko yesiqhelo
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Xanduva » Ukudideka malunga nezatifikethi zokugonya kuthintela ukubuyela kwimeko yesiqhelo
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Ukubambisa • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Technology • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
Ukudideka malunga nezatifikethi zokugonya kungathintela ukubuyela kwimeko yesiqhelo
Ukunqongophala kweerekhodi zedijithali kwamanye amazwe, kubandakanya i-US, kubonisa ukuba imeko yokugonywa iyasebenza.
Izitofu zanconywa njengesixhobo sokuhamba kunye nentwana yethemba kumzi mveliso.
Imithetho eqhekekileyo kunye nokungabikho kwezivumelwano ezifanayo kuyaqhubeka ukuthintela uhambo.
Abahambi bashiyeke bedidekile ngendlela yokubonelela ngobume babo bokugonywa.
Ukunqongophala kwenkqubo eyamkelweyo yokuqinisekiswa kweyeza lokugonya kungaphazamisa ukubuya kohambo njengoko uninzi lwabahambi lushiye ukudideka malunga neemfuno zokuvalelwa wedwa kunye nezithintelo zohambo. Ngemithetho eyahlukeneyo, abanye banokukhetha uhambo lwasekhaya, bajongane neendawo ezixhomekeke kutyelelo lwamanye amazwe.
Izitofu zanconywa njengesixhobo sokuhamba kunye nentwana yethemba kumzi mveliso. Nangona kunjalo, imithetho eyahluliweyo kunye nokusilela kwezivumelwano ezifanayo ziyaqhubeka ukuthintela ukuhamba, kunye nezithintelo zokuhamba zingowesibini ukuthintela ukuhamba kwe-55% yabaphenduli kuphando lwamva nje lweshishini.
Abahambi bashiyeke bedidekile malunga nendlela yokubonelela ngobume babo bokugonya ngemithetho eyahlukeneyo kwiindawo ezahlukeneyo. Kwezinye iindawo, abahambi kufuneka batsibe iihupula ezininzi ukubonisa imeko yabo, kwaye ukuba baya kumazwe amaninzi, le nkqubo ihlala yahlukile. Nangona kubonakala ngathi izithintelo zinciphile, ubunzima bokubonisa ugonyo buya kuqhubeka bungumqobo.
Iintlanga ezahlukeneyo ziyalela imithetho eyahlukeneyo ukubonisa ubungqina bokugonywa, ukusuka kwiphepha ukuya kwiirekhodi zedijithali. Iirekhodi zedijithali akukho lula ukuzifumana kwezinye izizwe, kwaye ziya kongeza umaleko wobunzima kubahambi, onokubangela ukuba baphinde bacinge ngezicwangciso zabo.
Ubungqina bokugonywa kubonakala ngathi kukucinga emva kokukhutshwa kwesitofu. Ukunqongophala kweerekhodi zedijithali kwamanye amazwe, kubandakanya i-US, kubonisa ukuba imeko yokugonywa iyasebenza. IATAUkupasa kohambo kuye kwanconywa njengesisombululo kumzi-mveliso kodwa ukuthathwa kube kubi, kwaye bekukho umda wokudityaniswa kukarhulumente. Nabanye ababoneleli abangena kwisithuba, iyile inkqubo eqhekekileyo efuna ukuba abahambi balayishe ubungqina ngokwabo ukuze benze ukugqitha kwidijithali. Abahambi banokuhamba baye kwiindawo ezinemithetho elula okanye bakhethe iihambo zasekhaya njengesizathu sokubangela ukuba iindawo ziphoswe ziindwendwe.
Abahambi bafuna izisombululo ezilula ezifuna umgudu omncinci. Umzi mveliso kufuneka usebenzisane ukudibanisa isisombululo esisebenzela bonke abachaphazelekayo kushishino. Kude kube lelo xesha, abanye baya kuyeka ukuhamba ngenxa yobunzima bokubonisa imeko yogonyo.
Ngaphandle kokuba kuthathwe amanyathelo kungekudala, inokuthi icinezele ibango lamanye amazwe njengoko imigaqo kunokuba nzima kakhulu ukuyiqonda kwaye ukubuyiselwa kweendawo ezinokubuyela endaweni kusenokuma ngenxa yoko.